Dadkii lagu xiray Howl-galladi Islii oo oo dib loogu soo celinayo Dalka // Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Dadkii lagu xiray Howl-galladi Islii oo oo dib loogu soo celinayo Dalka // Warbixin
Nairobi (KON) - Waxaa jiray Warar sheegaya in Dadkii lagu xiray Howl-galladii Maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay Nairobi loo celin doono Soomaaliya, warkaas waxaa haatan xaqiijiyay Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur 'Ameerika'.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur Ameerika, ayaa sheegay in Dadkii la qab-qabtay oo aan haysan sharci ay ku deggan yihiin Dalka Kenya dib loogu celin doono Soomaaliya.
Wararka aya sheegaya in ugu yaraan 420 Soomaali oo dhawaan lagu xir-xiray Howl-galladii ka dhacay Xaafada Islii aysan haysan Sharci.
Wasiirka Arimaha Gudaha, Godax Barre oo haatan ku sugan Nairobi iyo Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa Saakay la kulmay Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, Joseph ole Lenku siduu Safiirka ku sheegay bartiisa Facebook.
Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa Qoray "Wasirka arrimaha Gudaha ee Somaliya, Aniga iyo Qunsulka Safarda Siyad M Shire, waxan la kulanay Cabinet secretary of interior of Kenya. Waana u shegnay in dadkena aanan la bahdilin. Wuxu noo shegay inay yihiin Dad sharci daro ku jooga Kenya, Somaliyana loo celinaayo. kuwa sharci ama Qaraaqaha Qaxootiga haysta waa la sii daynayaa."
Sidoo kale Macluumaad ay Keydmedia Online ka heleyso Diblomaasiyiin ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay kala saxiixdeen Warqad qoreysa in Dadkii lagu xiray Nairobi loo tarxiilayo Soomaaliya.
Diblomaasi Codsaday in Magaciisa aan loo adeegsan Warbixintaan ayaa yiri "Madaxweynaha iyo Uhuru Kenyatta waxey ku heshiiyeen in Soomaalida ku xiray Xabsiyadda Nairobi loo celiyo Dalkii (...) Siiba kuwa aan haysan Sharci ama kuwa lagu tuhunsanyahay in ay xiriir la leeyihiin Argagixisadda"
Safiir Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa sheegay in safaaradda Soomaaliya ee Nairobi ay baareyso Dadkii lagu qabqabtay howlgalladii Nairobi laga sameeyay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay.
Maalmahan, Dalka Kenya gaar ahaan Goobaha ay degan yihiin Dadka Soomaalida waxaa kusoo kordhayay Falal isagu jira Qaraxyo, Dilal iyo Howlgallo u muuqdo in loogu Qiil-dayayo in Soomaalida laga soo saaro dalkaasi.
Ciidamada Amaanka Kenya ayaa samaynaya Howlgallo ay ku qab qabanayaan Dadka Soomaalida ah, kuwa Sharciga leh iyo kuwa aan lahayn, iyagoo lagu eedeynayo in ka danbeeyaan Amni Darada ka taagan dalkaasi.
Weerarka ayaa ku billowday qaraxyo waaweyn oo xigtay rasaas toos ah xili dabley isku dayday inay la wareegto Saldhigga.
Kiisaska COVID-19 oo sara u sii kacay
Warar 4 March 2021 18:49